Azonao atao ve ny mahazo ny backlinks momba ny domains?
Mba hananganana fanentanana fananganana rindran-kira, ny tompon'ny tranonkala iray dia tokony hahafantatra ireo hevitra manan-danja momba ity fomba fitsaboana amin'ny tranonkala ity. Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny fomba hanavahana ireo adiresy referendika, sy ny domains ary inona avy amin'ireny no mety hampisy lanjany ny tranokalan'ny tranonkala.
Voalohany indrindra, andeha hanazava tsipiriany bebe kokoa momba ireo fepetra roa mifandraika amin'ny rohy - ny sehatra referansy sy ny rohy.
Amin'ny ankapobeny, ny sehatra dia orinasa iray tsy manan-tsahala voafaritra ao anaty URL. Ohatra, ao amin'ny URL "http: // www. semalt. com, "ny teny hoe" semalt "dia natao ho an'ny sehatry ny orinasa iray mpanentana manokana ary mifanipaka amin'ny anaran'ny fikambanana.
Anaram-ponina avy amin'ny tranonkala dia fantatra amin'ny anarana hoe ref domains momba ny domains izay avy any aoriana.
Ary farany, ny rohy bakalorea dia rohy ao amin'ny tranonkala iray hafa izay manondro ny loharano web.
Noho izany, ny sehatra mifehy ny sehatra dia ny avy any amin'ny backlinks, ary ny rohy mankany amin'ny rohy dia ny rohy mankany amin'ireo tranonkala izay mampifandray ny tranokalanao.
Ilaina ve ny mahafantatra ny fahasamihafana misy eo amin'ny sehatra sy toeran'ny referal?
Amin'ny fikarakarana fikarohana tsotra amin'ny fampiasana ny iray amin'ireo fitaovana famakiam-peo Semalt, dia azonao atao ny manamarika ny habetsaky ny sehatra mifandraika sy ny rohy mifandray amin'ny pejy Internet anao. Ny fampahalalana tadiavinao dia ny fifandraisana eo amin'ny sehatra sy backlinks mifandraika. Ohatra, raha manana backlinks tsy mitongilana izay manondro ny toerana misy anao ianao ary misy sehatra maromaro ihany, dia maneho fa malemy ny paikady fananganana rohy ary mitaky fanatsarana. Ankoatr'izay dia mety hifanandrify amin'io fifandraisam-bola io i Google miaraka amin'ireo hetsika tsy misy dikany izay mety nataonao mba hahazoana rindran-dalana betsaka. Ho vokany dia mety hisy fiantraikany ratsy eo amin'ny lahatsoratry ny pejy Internet izany. Ny fitaovam-panadiovana dia mamely lozisialy avo lenta sy teboka farafahakeliny noho izy marika momba ny sanda mifandraika amin'ny banky (sehatra bilaogy tsy miankina).
Inona no tokony hataonao mba hahazoana rohy kokoa?
Raha ny fikarohana ao amin'ny tranonkala dia mampiseho fa manana olana mahakasika ny rohy ivelany ianao, dia tokony hanomboka hitady fomba vaovao ahafahana mahazo backlinks domains. Hanomboka amin'ny fananganana votoaty miavaka ho an'ny tranokalanao izay mety ho sarobidy ho an'ireo mpamaky mety aminao. Raha manao izany ianao, dia hahazo siramamy mifandraika amin'ny fikarakarana ahafahan'ny mpampiasa mizara tsara ny votoatiny. Ankoatra izany, mitondrà fikarohana momba ny tsenan'ny tsenanao mba hahita ny toerana ahafahanao mametraka ny backlinks anao. Mifandraisa amin'ireo tompon'ny tranonkala na mpitoraka blaogy izay toa mendrika ho anao ny ao anatiny ary mangataka azy ireo hampiroborobo ny fanentanana fananganana rohy. Tsy hanao na inona na inona izy ireo. Izany no antony tokony hanomezanao azy ireo tombontsoa na fandoavam-bola tsara.
Ankoatra izany, azonao atao ny mahazo rindry amin'ny kalitao amin'ny alàlan'ny famoahana bilaogy. Fotoana tena tsara ny manolotra ny raharaham-barotra ho an'ny besinimaro. Ataovy azo antoka fa mamorona kalitao ianao ary mifototra amin'ny votoatin'ny bilaogy izay mifantoka amin'ny mpampiasa. Ny tononkalonao dia tsy tokony hisaina toy ny dokam-barotra sy ny rindran-damina tokony hojerena Source .